सी.जी. मोबाइल सेवा विस्तार गर्न अदालतले अनुमति दियको मा फेरी किन सरकारले रोक्यो ! कारण एस्तो::आर एम खबर
काठमाडौं । अहिले नेपालमा विशेष गरेर सञ्चार क्षेत्रमा तीन कम्पनीहरु रहेका छन । नेपाल टेलिकम,एनसेल र स्र्माट सेल यो बाहेक अन्य दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरु रहेका छन तर तिनीहरुको चर्चा कमैं मात्रामा हुने गरेको छ । प्रचुर मात्रामा सम्भावना भएको सञ्चार क्षेत्रमा अहिले यी ती संस्थाहरुले अकाधिकार जमाउन खोजेको जस्तो देखिन थालेको छ ।
नेपाली बजारलाई ध्यानमा राखेर चौंधरी ग्रुपले पनि करिब छ वर्षदेखि देशभर मोबाइल सेवा विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । चौधरी ग्रुपको मातहतमा रहेको सीजी कम्युनिकेसनलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो कदमले थप अप्ठ्यारो पारकोे छ ।
सर्वोच्च अदालतले युनिफाइड लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सीका लागि सीजीको पक्षमा फैसला गरपछि सेवा विस्तारको योजना बनाएको थियो । गत मंगलबार प्राधिकरण भ्याकेटमा गएपछि थप अप्ठ्यारोमा परको हो । योग्यता पुगेर पनि आफूलाई युनिफाइड लाइसेन्स नदिइएको, फ्रिक्वेन्सी नदिने चलखेल गरको आरोप लगाउँदै आएको सीजी र प्राधिकरणबीचको विवाद उत्कर्षमा छ ।
‘एक दशकदेखि हामीलाई सुनियोजित ढंगले रोक्ने काम भइरहेको छ,’ सीजीको माउ कम्पनी चौधरी गु्रपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले भने, ‘राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति कमाएको सीजी कम्युनिकेसन्सलाई लाइसेन्स लिनबाट रोक्नु सुनियोजित हो।’
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी लाइसेन्सको अनुमति दि“दासमेत प्राधिकरणले रोकेको उनको आरोप छ । सीजी कम्युनिकेसन्स र प्राधिकरणबीचको यो द्वन्द्व अहिले अदालतमा विचाराधीन छ । गत पुस १० गते सर्वाच्चले सीजी टेलिकम्युनिकेसन्सलाई लाइसेन्स दिनू र प्राधिकरणले पुस ४ गते जारी गरको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको सूचना रोक्नू भन्ने आदेश दिएको थियो ।
लगत्तै प्राधिकरणले उक्त आदेश खारजीको माग गर्दै निवेदन लिएर सर्वोच्च गएको छ । न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले एकपक्षीय सुनुवाइ गर्दै सीजीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाइसकेको र त्यसको कार्यान्वयनमा नरोक्नू भनी आदेश दिएको थियो ।
प्राधिकरणले मंगलबार सर्वोच्चमा दर्ता गराएको भ्याकेटमा सीजीले लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएको भए पनि प्राधिकरणबाट लाइसेन्स प्राप्त नगरको दाबी गरको छ । आधारभूत टेलिफोन सेवा (युनिफाइड) लाइसेन्स लिनको लागि वर्षौंदेखि गरको प्रयासलाई प्राधिकरणले बेवास्ता गर्दै फ्रिक्वेन्सीहरू आफूले नपाउने गरी बिक्री गर्न लागेपछि सीजीले अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।